Lataliyaha Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inay jiraan siyaasiin abaabulayao banaanbax dowlada ka dhan ah. – The Voice of Northeastern Kenya
Lataliyaha Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inay jiraan siyaasiin abaabulayao banaanbax dowlada ka dhan ah.
Siyaasiga Salaad Cali Jeele ahna la taliyaha arimaha siyaasida ee Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo oo xalay Warbaahinta kula hadlay Magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu jiro abaabul banaanbax looga soo horjeedo dowladda oo la qorsheynayo inuu Muqdisho ka dhaco .
Salaad Cali Jeelle ayaa sheegay in banaanbaxaas ay qaban qaabinayaan Siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dowladda kasoo horjeeda ayna u adeegsanayaan sida uu hadalkiisa u dhigay dadka barakacayaasha ah ee kunool Magaalada Muqdisho,isagoo sheegay in lagu bixinaayo qarashaad farabadan .
Waxa uu tilmaamay in Siyaasiyiinta qaban qaabinaayo banaanbaxa uu qaar ka mid ah magacyadooda garanayo isagoo sheegay inay lacago kasoo qaataan dowladda Imaaraadka Carabta ayna ku doonayo in dowladda iyo Shacabka la iska horkeeno
← Dowladda Baxrayn oo dhalashada kala laabata 138 ruux
Ciidanka Jubaland oo gacanta ku dhigay xubno shabaab ka tirsan oo dilk gaystay →